Dalxiis Warshad - Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Dhismaha Qalabka Co., Ltd.
Gudiga darbiga PVC
Guddiga Saqafka PVC
Wax taaj oo kale PVC
Guddiga Xaraashka PVC
Gudiga Saqafadda WPC
Warshaddeenu waxay ku taal Zhejiang China.The muuqaal qurux badan iyo meel ku habboon in ay Airport.With our shaqaalaha xirfadeed iyo khadadka wax soo saarka, awood noo si ay ula kulmaan shuruudaha wax soo saarka aad.
Huaxiajie waa soo saaraha gaarka ah ee darbiga PVC iyo darbiyada saqafka, wax taaj oo kale PVC, PVC / WPC profiles iyo PVC / WPC decking dibadda. Wax soo saarkayagu waa kuwo deegaanka u fiican.
Fursad iyo boos buuxa oo aan siino, waxaan ku tusi lahayn dhammaan faa'iidooyinkayada oo aan isla korno. Waan hubaa inaan la dhisi karno xiriir ganacsi saaxiibtinimo muddo-dheer iyo saaxiibtinimo shirkaddaada sharafta leh aaminaaddaada iyo adeeggayaga wanaagsan awgood.
Waxaan had iyo jeer raadineynaa iskaashi daacad ah oo wadajir ah macaamiisha adduunka oo idil. Waxaan noqon karnaa alaab-qeybiyeyaashaada ugu wanaagsan ee leh alaabooyin balaaran oo balaaran.Sidoo kale waxaan awoodnaa bixinta adeegyada OEM iyo ODM.
Iyadoo koritaanka suuqa caaryada, waaxda R&D ee shirkaddayadu waxay leedahay injineero xirfadlayaal ah oo diiradda saaraya horumarinta alaabada.Waaxda R&D kaliya ma aqbasho mashaariicda OEM, laakiin sidoo kale waxay qaadan kartaa mashaariicda ODM.Iyada oo la adeegsanayo naqshadeeyaha aadka u fiican, waxaan sameyn doonnaa badeecado derbi ah oo kaamil ah si loo daboolo shuruudaha macaamiisha iyo suuqa mustaqbalka.
Guddiyadaha Hot Hot PCV Wall iyo Saqafka PCV Guddiyada Gudaha TV Background
Daboolka derbiga ee PVC wuxuu noqon karaa mid aad u qurux badan!
Taxaddarrada isticmaalka darbiyada derbiga dibedda
Sida loo rakibo darbiyada PCV derbiyada
MAYA 355 Wadada Zhiyuan, Magaalada Wukang, Deqing County, Gobolka Zhejiang, Shiinaha